သစ္စာနီ | လမ်းအိုလေး
Tag Archives: သစ္စာနီ
‘ဒက်ဒလက်’ လို ကမ္ဘာကို ဖမ်းဆီးထားချင်တယ်
နှလုံးသားဟာ တွန့်ခေါက်တောင် တစ်တောင်ဖြစ်တယ်။
ချိန်ခွင် မရှိဘူးဆိုတာ ။
Categories: Kabyarz | Tags: သစ္စာနီ, Kabyarz, Thit Sar Ni | Permalink.
(ဒီရေစီးသံ – ၁၊ ၁၉၉၀)
Categories: Kabyarz | Tags: သစ္စာနီ, Kabyarz, lanolay, modernist poetry, Thit Sar Ni | Permalink.
(ဂျပန်ခေတ်ပေါ်ကဗျာ – သစ္စာနီ။ ဇူလိုင်၊ ၂၀၀၃)
Categories: Kabyarz | Tags: သစ္စာနီ, Kabyarz, modernist poetry, Thit Sar Ni | Permalink.
(ဟန်သစ် – ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၃)
(စတိုင်သစ် – ဇူလိုင်၊ ၂၀၀၃)
ရွှေမျက်နှာရဲ့ မြအသည်း (သစ္စာနီ)
သူ့ကိုတော့ စောစောထဲက မြင်သည်။ မထင်၊ မထင်၍ မခေါ်မိ၊ ထင်စရာကလည်း မြင်ရသည့်သူမှာ သာမန်သာ ဖြစ်သည်။ စန္ဒာ၏ခရမ်းရောင် အိပ်မက်ထဲက သူနှင့်ကား တပုံတခြား၊ ဂဠုန် နဂါး ။ ကြည့်လေ၊ ကန်တော်ကြီးရေကို ခြေစိမ်ကာ မြက်ခင်းပြင်ပေါ် စိမ်ပြေနပြေ ထိုင်နေသည့် လူညိုညို သွယ်သွယ် သေးသေး၊ ဘရာကြော်ထုပ်ကို ဘေးချပြီး ကမ္ဘာကျော် ကျောက်ဆစ် ပန်းပုရုပ် တခုလိုငေးငေးငူငူကြီး၊ ဒါပဲ။
စန္ဒာနှင့် ချိန်ထားသည်ကား ကဗျာဆရာ ကိုသင်းထုံ၊ သူ့ကဗျာလေးများ ဖတ်ရသည်မှာ ရှိူက်သံကို ပွေ့ဖက်ရသည်သို့ ရှိသည်.။မျက်ရည်ကို အနံ့ရလာသည်.။ တခါတရံ လောကကို မကျေမနပ် ကျိန်ဆဲသံလေးများ ကြားရသည်။ အဲဒါကိုက စိတ်ဆိုးနေသောနှင်းဆီ ပွင့်ဖတ်ကလေး ခြေဆောင့်နေသည်နှင့်တူသည်။ ခြောက်သွေ့ အက်ကွဲနေသော သူ့ကာရံ ကလေးများသည် ငွေရည်စိမ်ထားသော သီဝေခေါင်မြင့်သည့် တိမ်ပွင့် ကြားထဲက ယိုစီး လျှောကျ လာသလိုဖြင့် ဘွားကနဲ မြစမ်းချောင်း ထဲက ရေပွက်ကလေးများ ပလုံစီ ပေါက်ကွဲရာမှ ခုန်ထွက် မွေးဖွားလာသလို ရှိသည်.။ စန္ဒာက သူ့ကဗျာလေးများကို ဖတ်ရင်း သည်သို့ ကင်ပွန်း တပ်ခဲ့သည်။ ချစ်စရာ နှုတ်ခမ်းလေးများ၊ စန္ဒာရဲ့ ခရမ်းရောင် အိပ်မက် ပန်းတောမှာရော၊ သည် အတောင် ပေါက်နေသည့် ကဗျာလေးများချည်း ဟိုနားသည်ဝဲပျံလို့ပဲ.။နောက်တော့ စန္ဒာ ကဗျာဆရာကို မိတ်ဆက်စာရေးမိသည်။ သည်လိုနှင့် စာတံတား ခင်းမိကြသည်။ ကြာပြီ၊ ခုတော့စန္ဒာက လူုချင်းတွေ့ရန် ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံသို့ ချိန်းဆိုခဲ့သည်။
Categories: Short Stories | Tags: သစ္စာနီ, ၀တ္ထုတို, Short Stories, Thit Sar Ni | Permalink.
the light beyond / our shadows